Zvigadzirwa fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi - Chikamu 4
Mhangura Shaft Sleeve-075
Mhangura Shaft Sleeve-075 Pane iyo shaft yesimbi sleeve inobereka ibasa re, nderwekutsvedza kutakura mhando, ibasa pasi pekutsvedza kukweshera kutakura, hama shaft iri kutenderera, zvakajairika zvinoda rubatsiro kuti uve negirisi sisitimu inoshanda. yakadzikama, yakavimbika, isina ruzha.Pasi pemamiriro ekushongedzwa kwemvura, inotsvedza nzvimbo iri kuzodza mafuta pasina kuonana kwakananga, zvakare inogona kudzora zvakanyanya kupokana kwekurasikirwa uye kupfeka kwepamusoro mafuta firimu zvakare ine ...
Ceramics Shaft Sleeve-075 Ceramics Shaft Sleeve-075 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba rehunyanzvi, zvishongedzo zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wemakwikwi. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva pakutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa muInternational pombi mar ...
Shaft Sleeve-075 YEMAHARA SLEEVE KUKUNDA MAMODI Kuneta Kutsemuka. Iyo yakajairika kutadza nzira yeakafukidzwa shaft sleeve ndeye Kuneta Kutsemuka. Kuneta kutsemuka kunoitika kana chinhu chikaiswa pasi pekudzokororwazve mutoro kutenderera senge kutenderera kufamba ine yakakwira radial mutoro inogadzira inochinja maitiro uye kana torsional mutoro. Mune akawanda maoresi emachira emubereki zvinhu zvemuoko zviri undercut kuti zviite nyore weld / thermal inlay. Izvi zvinoguma nesimbi yesimbi yeyakaomesesa, yakakwira carbide matrix t ...
Slurry Pump Labyrinth sleeve-062 Yaobang Slurry Pump Labyrinth sleeve 100% inochinjika neSlurry Pumps OEM Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi runyorwa 1.5 / 1B-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: B062 2 / 1.5 B-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: B062 3 / 2 C-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: C062 4/3 C-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: C062 4/3 D-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: D062 6/4 D-AH Slurry Pump Labyrinth sleeve kodhi: D062 6/4 E-AH Slurry Pump Labyri ...
Girisi Kukiya Mhete-046
Slurry Pump Girisi Kukiya Mhete-046 Yaobang Slurry Pump Girase Kukiya Mhete 100% inochinjaniswa neSlurry Pumps OEM Slurry Pump Girisi Kukiya Ring kodhi rondedzero 1.5 / 1B-YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yekodhi: B046 2 / 1.5 B-YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yenhare: B046 3/2 C-YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yekodhi: C046 4/3 C-YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yekodhi: C046 4/3 D-YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yekodhi: D046 6/4 D -YA Slurry Pump Girisi Kukiya Kodhi yekodhi: D046 6/4 ...
Stuffing Bhokisi Seal-122-R26 Bhokisi Rekututira Bhokisi Chisimbiso-D122-R26 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba tekinoroji, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa iwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva pakutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa muInternational pombi mar ...
Lantern Mhete-118 P50 Lantern Mhete-118 P50 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba tekinoroji simba, yakanakisa zvishandiso uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa mumusika wepombi wepasi rose. Isu ar ...
Kuisa-111 Paking-111 Winclan fekitori Tinonakidzwa nesimba rakasimba rehunyanzvi, zvishongedzo zvakanakisa uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita mutambi anotyisa mumusika wepombi wepasi rose. Isu tiri murume anoremekedzwa ...
Lantern Restrictor-118 Slurry Pump Lantern Restrictor inochinjaniswa neAH Series Slurry Pump Code Winclan fekitori Isu tinonakidzwa nesimba rakasimba tekinoroji, zvigadzirwa zvakaisvonaka uye akakwana ekuongorora zviridzwa, kuti tikwanise kukupa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa nemakwikwi mutengo. Taura nesu Nezvedu / Nheyo yedu yakanaka mhando, munguva yekutakura, mutengo unonzwisisika. Kubva kutanga kudiki muna 2004, Winclan Pump yakura kuita ...
Gland Kurongedza Chisimbiso Gland KUCHISIMBISA Gland kuiswa chisimbiso ndiyo yakajairwa fomu yekuisa chisimbiso inogamuchirwa kune akawanda slurry pombi kunyorera nekuda kwehukama hwakasimba, zvishoma nezvishoma kutadza maitiro uye nyore kwekuchengetedza. ANATOMY YEGWENDE CHISIMBISO Chisimbiso chegland chinoumbwa nekamuri (Stuffing Bhokisi) iyo inogara zvimiti zvekumisa zvimisikidzo seLantern Rings, Neck Rings uye Gland Packing. Iyo kamuri inobvumidza yekutsvaira mvura kuti ipe chikafu munzvimbo yekuisa chisimbiso kuburikidza neyegomba gomba. Passi ...
Exeller Chisimbiso KUSIMBISIRA KUZIVANISA Zvisimbiso zvinodzikisa zvakagadzirirwa kudzikamisa kumanikidza kumanikidza kubva mupombi kupinda mugland kana nzvimbo yekutenderera yepombi. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekubatanidzwa kwesimba remazana uye chinhu kushivirira. Exeller zvisimbiso zvinovimba nepombi yekumhanyisa uye kushivirira pakati peimba neanodzinga kumeso kuchengetedza kuita. Imwe yeakanyanya kukanganisa ekudzora chisimbiso ndiko kukanganisa kunoda kuitwa pakati pekuita kwepombi nekuisa chisimbiso kuita ...